बिहे अगाडि केटा केटीको गफ !!
बिहे अगाडि केटा केटीको गफ!! माथि बाट तल पड्दै जानुस् !!
केटा: साचै भन्नु पर्दा मैले यो छण धेरै कुरेको थिए।
केटी: के भन्न खोजेको तिमी मलाई छोड्न चाहन्छौ ?
केटा: होइन!! त्यस्तो तिमी नसोच.
केटी: के तिमी मलाई साचै मन पराउछौ?
केटा: अफ्कोर्स !! सधैं भरी.
केटी: के तिमी मलाई ढाट्दै छौ ?
केटा: नो!! किन तिमी यस्तो वाइयात कुरा सोच्दैछौ ?
केटी: के तिमी मलाई किस गर्छौ ?
केटा: सधैं भरी ।
केटी: तिमी मलाई पिट्छौ कि ?
केटा: के तिमी पागल त भएनउ ?
केटी: के म तिमीलाई विश्वाश गरौँ ?
बिहे भईसक्यो अब तल बाट माथि पढ्दै जानुस् !!
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 5:18 PM